एउटा अबकाश प्राप्त शिक्षकको बयानः ‘म चुकेको बिन्दु’ « Sutra News
एउटा अबकाश प्राप्त शिक्षकको बयानः ‘म चुकेको बिन्दु’
१९ पुष २०७८, सोमबार १३:२०
आमाबुबाको न्यानो माया, दाइ र दिदीबहिनीहरूको पुलपुल्याईं अनि समस्त आफन्तजनको आस्ताको केन्द्रमा रहेर हुर्किएँ । प्रारम्भिक शिक्षा गाउँकै विद्यालय र कक्षा आठ, नौ र दश अलि टाढाको विद्यालयबाट लिएँ । साइन्स पढ्ने, डाक्टर वा इन्जिनियर बन्ने ठुलो सपना भएपनि गरिबी तथा विविध कारणले नेपाल ल क्याम्पसमा पढ्नुपर्यो । तेतातिरको असम्भावीत यात्रा( मेरो लागि) को बर्णन गर्न चाहन्न म ।
आइ. एल. उतिर्ण गरेर वि. एल. मा भर्ना मात्र भएको थिएँ, गाउँमा हाइस्कुल चलाउनु पर्यो । दरबन्दी खाली छ,हिंड् अब जागिर खा, हाइस्कुल चला भन्ने आम समुदायको अनुरोध लत्याउन मैले सकिन । गएँ । नियुक्ति लिएँ । जागिर खाएँ ।
मैले सुनेको, मेरा गुरुहरुले भनेको एउटा वाक्य सम्झिएँ ” आज्ञाकारी बन्नु, ठुलाले भनेको मान्नु, सानालाई माया गर्नु ।” मैले पनि मेरा छात्रछात्राहरूलाई यसै भन्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । सबैलाई यही वाक्य सिकाउन थालें । सबैलाई आज्ञाकारी बनाउन सक्दो प्रयत्न गरें । बनाएँ पनि । आफुभन्दा ठुलाले भनेको मान्नु, सानालाई माया गर्नु भन्ने पाठ सिकाएँ । करीब सात बर्षसम्ममा त्यस विद्यालयमा जम्माजम्मी सातसय बालबालिकालाई आज्ञाकारी नागरिक बनाएँछु ।
त्यसपछि अर्को विद्यालयमा सरुवा भएर गएँ । करीब १० बर्ष प्रधानाध्यापक भएर काम गरियो । दशबर्षको अन्तरालमा करीब एकहजार बालबालिकालाई आज्ञाकारी नागरिक बनाउन सफल भएँ । त्यसपछि मा. वि. मा स्थायीमा नाम निकालेर अर्कै विद्यालयमा नियुक्ति लिएँ । त्यहाँ पनि करीब पन्ध्रसय बालबालिकालाई आज्ञाकारी बनाएँ । त्यसपछि सरुवा भएर पुरानै विद्यालयमा प्रधानाध्यापक बनेर काम गरें । बल्ल स्रोतव्यक्ती बनेर काम गर्ने अवसर मिल्यो । शिक्षण पेशामा लागेको सत्रबर्ष भैसकेको थियो । अब भने बल्ल विध्यार्थी समाजबाट शिक्षक समाजमा प्रवेश गर्ने मौका मिल्यो । समस्त समाज अराजक भएको महसुस भयो । आन्दोलन, तोडफोड, हत्या, हिंसा, नाराजुलुस आदि । किन यसो हुदैछ ???? आफैभित्र प्रश्न उब्जियो ।
समस्त समाज अराजक छ । हत्या, हिंसा, क्रोध, लुटपाट , आगजनी , तोडफोड , नाराजुलुस , के के हो के के !! बालबालिकाको माध्यमबाट पुरै समाजलाई सत्मार्गमा हिंडाउछु भनेर कम्मर कसेर अघि बढेको इन्द्रे कहानेर चुक्यो ? उसैलाई थाहा भएन । जिल्ल पर्यो । गहिरिएर घोत्लन बाध्य भएँ म ।
सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई हेरें । एउटा न एउटा राजनीति पार्टीमा लागेका, नेताको लँगौटीको फेटा गुतेका, आफ्नो नेतालाई ठुलोमान्छे मानेका , उनीहरुका आज्ञाकारी बनेका । अझै आज्ञाकारीताको पाठ आफ्ना विध्यार्थीलाई सिकाइरहेका । मनन गरें । कारण खोतलें । धेरै दिन अनिंदो बसें । बल्ल थाहा भो म चुकेको बिन्दु ।
मैले आज्ञाकारी बनाएर नै यस्तो भएछ । समस्त समाज बिग्रेको रहेछ । आज्ञाकारीको सट्टामा बालबालिकालाई जिम्मेवार बन्न प्रेरित गरेको भए आज समाजको यो दुर्दशा हुने थिएन । हिजोको गलत सिकाइले आजको समाज आज्ञाकारीताको नाममा अराजक बन्यो । ठुलाले युद्धमा जाऊ भन्दा होमियो । रेलिङ तोड भन्दा तोड्यो, ठुलाकै आज्ञा मानेर आगजनी, हत्या, हिंसा, तोडफोड, काटमारमा जुट्यो, संलग्न भयो । समाज भयभीत बन्यो । भड्क्यो । म आफै असुरक्षित महसुस गरिरहेछु ।
ठुलाको आज्ञा मान्नु मात्र भनियो । त्यही सिकाइयो । कस्तालाई ठुला मान्ने भनेर सिकाइएन । उनिहरुले त गुण्डालाई ठुला मानेछन् । डनहरुलाई ठुला मानेछन् । भ्रष्टाचार गरेर धनी बनेकालाई ठुला मानेछन् । काला धनले उच्च जीवन जिएकाहरूलाई ठुला मानेछन् । नेतालाई ठुला मानेछन् ।
हो म यहीँनेर चुकेंछु । थाहा पाउदा एउटा समाज अराजक भैसकेको रहेछ । यो अराजकताको जरो उखेल्न अब अझै लामो समय कुर्नु पर्ने हुन्छ ।
सम्पूर्ण शिक्षक समाज निर्माता हुन् । म आफै गल्ती भएको भए कृपया माफ दिनुहोला । मेरो विचारमा हामीले हाम्रा बालबालिकालाई आज्ञाकारी बनाउनु भन्दा जिम्मेवार बनाउन प्रयत्न गरौं ।
जिम्मेवार नागरिक आफैमा आज्ञाकारी पनि हुन सक्छ । ऊ विश्लेषक हुन्छ । विश्लेषण गर्छ ।आफू, आफ्नो समाज, राष्ट्र र राष्ट्रिय सम्पत्ति अनि सम्पदाको जिम्मा लिन्छ । रक्षा गर्छ, सके निर्माण गर्छ, तर विनाश गर्दैन । कुनै छद्मभेषीको उक्साहटमा अराजक बन्दैन । राष्ट्रको सम्पत्ति आफ्नै ठानी रक्षा गर्छ । विश्लेषण गरेर सही छ भने मात्र ठुलाको अर्ती मानेर काम गर्छ । नत्र अकर्मन्यतामा र कुकर्ममा पाइला समेत चाल्दैन ।
हो म यहीँ चुकेको थिएँ । मजस्ता धेरै चुकेका थियौं र आज आफ्नै आँखाले समाजको दुर्गति हेर्नुपरेको छ । आत्माग्लानी हुन्छ । अहिले कार्यरत कुनैपनि शिक्षकले यस्तो व्यहोर्नु नपरोस् । आफु जिम्मेवार शिक्षक बनौं । हरेक विद्यार्थीलाई जिम्मेवार बनाऔं । जिम्मेवार नागरिक बनाउनमा तपाईं हाम्रै अहम् भूमिका छ । भोलिको समाज आजको शिक्षकको मुखारबिन्दबाट निस्कने प्रत्येक वाक्य र वाक्यांशले निर्माण हुन्छ ।
दोहोर्याएर भन्छु, “ससारका शिक्षक महान हुन् ।”
प्रकाशित मिति : १९ पुष २०७८, सोमबार १३:२०
काठमाडौंको भारतीय दूतावासभित्र एक जना सुरक्षाकर्मीले आफैलाई गोली हाने, घटनास्थलमै मृत्यु
लगातार १५ हिट फिल्म दिएका राजेश खन्ना यी दुई कारणले गएनन् बिग बोस
‘निजी क्षेत्रलाई लखेट्दा, खुम्च्याउन खोज्दा सरकारी शैक्षिक संस्था खण्डहर’ (भिडियो अन्तर्वार्ता)
राजधानीमा नेशनल फिल्म तथा टीभी स्कुलको शुभारम्भ, राजेश हमाल र नीति शाहले गरे उद्घाटन
अर्बिटको सेयर २ जनालाई बेचेर साढे ३ करोड ठगी गर्ने पक्राउ
नायीका पुजा शर्माले यसरी गरीन् आकाशकै अगाडी प्रेमी युद्धको बयान(भिडियोसहित)